[Review] Bàn chải điện Brushie đa năng, tích hợp máy rửa mặt | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Bàn chải điện Brushie đa năng, tích hợp máy rửa mặt | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Bàn chải điện Brushie đa năng, tích hợp máy rửa mặt | Muasalebang in Muasalebang
“Izinyo, izinwele ekhoneni lomuntu”, ngakho-ke, inhlanzeko yomlomo nokuvikelwa kubaluleke kakhulu. Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe kanye nempilo yesimanje, ngaphandle kwezixubho ezivamile zamanje, kukhona izixubho zikagesi ezinemiklamo ehlakaniphile, eletha lula kubasebenzisi. . Enye yemigqa yokuxubha kagesi okukhulunywa ngayo kakhulu namuhla Brushie ibhulashi likagesi kuhlanganiswe nokunakekelwa kwezinsini nokugeza ubuso.
Ngakho ingabe lo mugqa webhulashi muhle ngempela? Ake sithole ngokubuyekezwa ngezansi.
1 Kungani kufanele usebenzise isixubho sikagesi?
2 Funda ngesixubho sikagesi seBrushie
2.1.1 I-Brushie Brush Material
2.2 Isakhiwo kanye nomgomo wokusebenza
3 Ingabe isixubho sikagesi sikaBrushie silungile?
4 Ibhulashi lamazinyo likagesi lingakanani? Uyithenga kuphi?
5 Isetshenziswa kanjani ibhulashi likagesi leBrushie ngempumelelo
Kungani kufanele usebenzise isixubho sikagesi?
Uma kuqhathaniswa nezixubho ezivamile, izixubho zikagesi zenzelwe ukuba zihlakaniphe, zifakwe izici eziningi ezivelele kanye nobuchwepheshe obuthuthukisiwe, eziletha lula kubasebenzisi. Ngokuqondile, umugqa Brushie ibhulashi likagesi Lokhu kunezinzuzo eziningi ezivelele ngaphezu kwezixubho zendabuko:
Izixubho zikagesi zikusiza ukuxubha amazinyo akho ngokushesha. Lokhu kungenxa yokuthi lo mugqa webhulashi uklanywe ngama-whirlpool bristles akwazi ukuhamba ngokushesha, ashanele kahle lonke uqweqwe lwamazinyo, izinsini nezinsini. Ijubane lokunyakaza kwaleli bhulashi nalo lishesha kakhulu kunokusebenzisa isixubho esivamile.
Izixubho zikagesi zenza ukuxubha kube lula. Lo mugqa womkhiqizo uwusizo ikakhulukazi kubantu abanezinkinga zezandla nezihlakala, abantu abakhubazekile, isifo samathambo okunzima ukunyakaza noma abantu abagulayo ngemva kokushaywa yisifo sohlangothi.
Ukuhlanza okujulile: Isixubho sikagesi sizokusiza ukuthi uhlanze noma iliphi i-plaque kanye namagciwane acashe ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo njengendawo eseduze nezinsini noma phakathi kwamazinyo…
Ukusebenzisa isixubho sikagesi akubangeli ubuhlungu bezinyo. Lokhu kungenxa yokuthi lo mugqa webhulashi uklanywe ngesakhiwo esikhethekile sokuhlanza ngokujulile, ngokushesha futhi ngokucophelela, kodwa ama-bristles aleli bhulashi enziwe athambile kakhulu, okusiza ukugwema ukucasuka.
Ukusebenzisa isixubho sikagesi kungalwa nephunga elibi, kukunike amazinyo amhlophe agqamile kanye nomoya omusha, kukusize uqiniseke ngokwengeziwe ekukhulumeni nasekusebenzeni.
Ukusebenzisa isixubho sikagesi kuzonikeza imiphumela engcono yokuhlanza amazinyo, ukususa amagciwane noqwembe kunezixubho ezivamile. Ngokukhethekile, izixubho zikagesi zingasusa ama-40% ama-plaque ngaphezulu namagciwane futhi zinciphise ingozi ye-gingivitis kufika ku-6% uma kuqhathaniswa nezixubho zendabuko.
Funda ngesixubho sikagesi seBrushie
I-Brushie ibhulashi lamazinyo likagesi elinokusebenza okungu-3-in-1 okungasetshenziswa kokubili njengesixubho futhi kukusize ekunakekeleni izinsini zakho ngenkathi futhi uhlanganisa umshini wokuwasha, okuletha lula kubasebenzisi. Ukuze ufunde kabanzi ngalo mugqa webhulashi, ake sibheke ukucaciswa, ukwakheka kanye nesimiso sokusebenza kwalo mkhiqizo.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana Brushie ibhulashi likagesi, into yokuqala okudingeka uyinake futhi uyiqonde ukucaciswa komkhiqizo. Ngokulandelayo:
I-Brushie Brush Material
Lo mugqa wesixubho sikagesi unomzimba owenziwe ngepulasitiki ye-ABS, amabhulukwe amakhulu enziwe ngezinto ze-Pedex ezivela eJalimane, kanti amabhulukwe asizayo enziwe ngama-Dupont bristles avela e-US. Lezi zinsiza zonke zihlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe njenge-CE, i-FCC noma i-FDA, ngakho-ke ziphephe kakhulu empilweni yomlomo yabasebenzisi. Ngakho-ke, awudingi ukukhathazeka noma ukukhathazeka ngokuphepha okuhlobene nempahla yalo mugqa womkhiqizo.
Imodi yokudlidliza yebhulashi lebhulashi
Isixubho sikagesi seBrushie siklanywe ngezindlela ezi-5 zokudlidliza, okuvumela abasebenzisi ukuthi bakhethe ngokukhululekile imodi ebafanele kakhulu. Ikakhulukazi, lezo zindlela zihlanganisa:
Imodi ehlanzekile isiza ukususa i-plaque ezindaweni eziphakathi kwamazinyo, isiza ukuhlanza amazinyo ngendlela ephumelela kakhulu.
Imodi emhlophe isiza ukwenza amazinyo abe mhlophe.
Imodi yesiPolish isiza ukupholisha amazinyo. Ngalesi sikhathi, ibhulashi lizojikeleza ngesivinini esikhulu ukwenza amazinyo acwebezele.
Imodi ethambile enejubane eliphansi isiza amazinyo akho womabili asuse lonke uqweqwe futhi anakekele kahle izinsini zakho.
Imodi ebucayi ifanele abantu abanezinkinga zamazinyo nomlomo njengezinsini ezibucayi, izinsini namazinyo.
Imodi yokudlidliza yaleli bhulashi likagesi le-Brushie iyingxenye yohlobo lokudlidliza kwe-sonic, ngakho-ke ikhanda lebhulashi ngeke liziphendulele ngokwalo. Ngakho-ke, lapho usebenzisa lo mkhiqizo, udinga ukuzungeza ngesandla ikhanda lebhulashi emuva naphambili endaweni yezinyo. Nokho, qaphela ukuthi amandla akufanele asetshenziswe. Imvamisa yokudlidliza yomshini ifinyelela izikhathi ezingama-31,000/ngomzuzu.
I-Brushie brush ukumelana namanzi
Umkhiqizo ufakwe isici samazwe ngamazwe se-IPX7 esingangeni manzi. Njengamanje, leli izinga lesimanje elingangeni manzi okungezona zonke izixubho zikagesi emakethe ezinazo.
Isikhathi sebhulashi lebhulashi
Lesi sixubho sikagesi seBrushie sizoma ngokuzenzakalela ngemva kwemizuzu engu-2 kusukela sivuliwe. Ngaphezu kwalokho, phakathi nokusetshenziswa njalo ngamasekhondi angu-30, ibhulashi lizoma isekhondi elihlukanisiwe ukuze libonise umsebenzisi ukuthi ashintshele kwenye indawo yamazinyo.
Inombolo yamabhethri aphinde ashajwe ebhulashi
Ibhulashi leBrushie linebhethri elingu-800mAh nesikhathi sokushaja esingaphansi kwamahora ayi-10. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ubuye uklanywe ngokukhanya okukhomba emzimbeni ngesibani esibomvu sokushaja, isibani esiluhlaza sokushajwa ngokugcwele nesibani esibomvu esikhanyayo ku-voltage ephansi, idivayisi idinga ukushajwa.
Idivayisi isebenzisa ukushaja kwe-USB okungenantambo okuhlakaniphile. Ngemva kokushajwa ngakunye okugcwele, ungasebenzisa idivayisi cishe izinsuku ezingu-50.
Umsindo okhiqizwa ibhulashi leBrushie
Ngokusho komkhiqizi, izinga lomsindo elikhiqizwa ibhulashi leBrushie lingaphansi kuka-65dB. Ngakho-ke, leli zinga lomsindo limnandi kakhulu, alithinti abantu abaseduze.
Ukwakhiwa kwekhanda lokugeza ubuso
Njengoba kushiwo ngenhla, i-Brushie ingumugqa womkhiqizo webhulashi kagesi onomshini wokugeza ubuso. Leli khanda lokugeza ubuso liklanywe kahle linama-bristle athambile, akuvumela ukuthi uhlanze kalula ubuso bakho kanye nezinhlangothi zekhala lakho.
Ibhulashi le-Brushie litholakala ngemibala emibili, emnyama nepinki, ifanele amadoda nabesifazane ukuze abasebenzisi bakhethe kuyo.
Isakhiwo kanye nomgomo wokusebenza
Ibhulashi likagesi leBrushie lakhiwe ngomzimba ophathwa ngesandla onosayizi omaphakathi onezinkinobho zokulawula imodi, inkinobho yokuvula/yokuvala yebhulashi; 2 amakhanda esixubho amise okwegagasi enziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu anekhanda lokugeza elingu-1 lokugeza ubuso bakho nekhanda elingu-1 lokubhucungwa kobuso. Ngaphezu kwalokho, umshini uza neshaja yebhethri yebhulashi kanye nembobo ye-USB engenantambo.
Ngokuyisisekelo, ukwakheka kwalo mshini akuyinkimbinkimbi kakhulu. Zonke izinto zokusebenza nezitsha eziza nebhulashi zifakwa ebhokisini likanokusho, elidonsa amehlo.
Lesi sixubho sikagesi seBrushie sinikeza izindlela zokusebenza ezi-5 ezihlukene ezihlanganisa i- Clean, White, Polish, Milder and Sensitive ukuze abasebenzisi bazikhethe futhi bazilungise ukuze bavumelane nezidingo zabo. Ngaphezu kwalokho, lo mugqa webhulashi kagesi nawo unesici esakhelwe ngaphakathi sokuhlanza ubuso. Ungashintsha ngokuphelele phakathi kwemodi yokuxubha nemodi yokugeza ubuso ndawonye ngokushesha futhi kalula.
Umkhiqizo umshini kagesi odlidlizayo ukuze ukhiphe uqweqwe emazinyweni. Phakathi naleso sikhathi, ngemodi yokugeza ubuso, umshini udala ukudlidliza okuncane, okuthambile ngokwanele ukususa konke ukungcola nothuli esikhumbeni ngaphandle kokubangela umuzwa wokoma nokungakhululeki.
Ingabe isixubho sikagesi sikaBrushie silungile?
Umnikazi Brushie ibhulashi likagesi Izoletha izinzuzo eziningi kumsebenzisi. Okokuqala nje, inomklamo wesimanje, okulula ukuwusebenzisa onemishini esezingeni eliphezulu ukumelana namanzi. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo ubuye ube nezindlela eziningi zokudlidliza ukwenza umshini ulungele zonke izimo zempilo yomlomo wamanje. Ngaphezu kwalokho, lesi sixubho sikagesi sisethwe ukuthi sime ngokuzenzekelayo ngemva kwemizuzu emi-2 futhi sime kancane ngemva kwemizuzwana engu-30 ukuze sishintshele kwenye indawo yamazinyo.
Ngaphezu kwalezi zici ezingenhla, leli bhulashi liphinde libe ngaphezu kwezixubho zikagesi ezikhona emakethe uma liza nekhanda elisetshenziswayo lokugeza ubuso elikusiza ukuhlanza ubuso bakho futhi wonge imali ehloniphekile. lapho kungadingeki uthenge into yokuwasha. umshini. Ama-bristles okugeza ubuso athambile kakhulu futhi mahle, okwenza kube lula kubasebenzisi ukuhlanza endaweni yekhala ngaphandle kokukhathazeka ngokulimaza isikhumba sabo.
Enye yezinye izinzuzo zalesi sixubho sikagesi ukuthi sinesikhathi sokushaja ngokushesha esingaphansi kwamahora angu-10 nesibani esikhomba emzimbeni, esivumela abasebenzisi ukunquma ukuthi bashaje nini, uma ibhethri ligcwele, njll. Kuyasiza ukuvikela. umshini futhi ilungele ngesikhathi ukusetshenziswa.
Ibhulashi lamazinyo likagesi lingakanani? Uyithenga kuphi?
Ukuze uthenge leli bhulashi le-Brushie, ungaya ngqo kuwebhusayithi esemthethweni yezokuthengisa ye-Brushie e-Vietnam, uxhumane nolwazi lapho noma ushiye igama lakho, ikheli kanye nenombolo yocingo yokuxhumana. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi futhi uku-oda lo mkhiqizo ku-inthanethi kumawebhusayithi amakhulu nahlonishwayo e-e-commerce eVietnam namuhla njenge-tiki, lazada, shopee…. Lawa mawebhusayithi avame ukuba namaphromoshini nezaphulelo ukukusiza ukuthi wonge imali eyengeziwe ekuthengeni izixubho zikagesi wena nomndeni wakho.
Intengo yesithenjwa: 990,000 VND / umkhiqizo.
Isetshenziswa kanjani ibhulashi likagesi leBrushie ngempumelelo
Ibhulashi le-Brushie akunzima ukulisebenzisa. Kodwa-ke, kulabo kini abasebenzisa lo mugqa womkhiqizo okokuqala ngqa futhi usebenzisa amabhulashi kagesi ngokujwayelekile, ungayisebenzisa kanjani? Brushie ibhulashi likagesi Ngokuyisisekelo, landela lezi zinyathelo:
Isinyathelo 1: Okokuqala, udinga ukushiya ibhulashi sibheke phansi bese ufaka inani elanele lokhilimu.
Isinyathelo sesi-2: Cindezela inkinobho ukuze uvule umshini bese ukhetha imodi yokudlidliza efanele isimo samazinyo kanye nenjongo yokuxubha amazinyo akho. Ngesikhathi sokuxubha, phawula ukuthi kufanele ubambe ibhulashi endaweni yamazinyo ukuze ihlanzwe imizuzwana engu-30 ngaphambi kokuthuthela endaweni entsha.
Isikhathi esimisiwe ngaphambi kokucisha okuzenzakalelayo kwalesi sixubho sikagesi imizuzu emi-2. Kodwa-ke, ohlelweni lokuxubha amazinyo, ungakwenza kabili, okulingana nemizuzu emi-4 yokuxubha isikhathi ngasinye, ukuxubha kabili ngosuku.
Uma kwenzeka ufuna ukusebenzisa ikhanda lebhulashi ukuhlanza ubuso bakho, izinyathelo zimi kanje:
Isinyathelo 1: Manzisa ubuso bakho bese ugcoba inani elifanele lokuhlanza esikhumbeni.
Isinyathelo sesi-2: Khetha imodi yokudlidliza efanele yesimo sakho sesikhumba bese uhambisa ikhanda lebhulashi endaweni enomshini wokuhlanza ukuze udale igwebu.
Isinyathelo sesi-3: Hambisa ikhanda lebhulashi lokugeza ubuso ebusweni bonke, kuhlanganise nezinhlangothi ezimbili zekhala ukuze uhlanze isikhumba.
Isinyathelo sesi-4: Hlanza ubuso bakho ngamanzi ahlanzekile bese ubomisa ngethawula elithambile.
Ngakho kungabonakala lokho Brushie ibhulashi likagesi umkhiqizo owusizo kakhulu wokunakekelwa, inhlanzeko yomlomo kanye nokuhlanza ubuso namuhla. Ngakho-ke, uma usazibuza ngokukhethela wena nomndeni wakho isixubho sikagesi, ungamzibi uBrushie.
Xem Thêm Máy in laser Canon ImageClass LBP151DW giá tốt tại nguyenkim.com | Muasalebang